Izambatho eziqhelekileyo zaseColombia | Iindaba Zokuhamba
Izambatho eziqhelekileyo zaseColombia
Maria | | isiko, ngokubanzi
Umfanekiso | Yemihla ngemihla yamaYuda
Isinxibo esiqhelekileyo selizwe sisampulu yenkcubeko kunye nembali yaso. Kwimeko yaseColombia, intsomi enxulunyaniswa nokunxiba ithetha ngokwahluka kwabantu bayo, imozulu kunye noncedo lwabantu bayo. Yindibaniselwano phakathi kweenkcubeko zemveli, inkcubeko yaseSpain neyaseAfrika eyayingeniswa elizweni ngexesha lobukoloniyali.
Ngokubanzi, umfazi unxiba isuti enamaqhosha amabini. Isiketi se-monocolor (esihlala simnyama) apho kuyilo olwahlukileyo kunye nemibala lubonakaliswayo, nangona olona luqhelekileyo kukubeka iiribhoni ezintathu ezityheli, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nobomvu esiphelweni sesiketi, ukufezekisa umahluko omhle. I-blouse eyizalisekisayo ine-neckline ye-booed kwaye ayikho i-neckline, enemikhono emide. Njengezixhobo, izihlangu ezinombala ofanayo kunye neeribhoni zesiketi kunye nomnqwazi obomvu okanye wekhaki okanye isikhafu ziyasetyenziswa.
Kwelinye icala, ikhabethe lendoda lenziwa ukuba liziqhelanise nelomfazi. Ihlala yenziwe ngeebhulukhwe ezimnyama kunye nehempe enemikhono emide edityaniswa nesikhafu esibomvu entanyeni. Izihlangu nomnqwazi ziyafana nezo zinxitywa ngumfazi.
Nangona kunjalo, Imimandla eyenza iRiphabhlikhi yaseColombia iyile isinxibo sabo esiqhelekileyo, eyahlula iimpahla phakathi kwamadoda nabasetyhini ukufezekisa iimpahla ezinxibelelene ngokugqibeleleyo. kwaye zinomtsalane ngokubonakalayo. Sidibana nabo, ngezantsi.
3 Isinxibo seLlanero
5 Ummandla weOrinoquía
6 Ummandla weCaribbean
7 Ummandla wePacific
Isinxibo esiqhelekileyo sabasetyhini kwingingqi yaseAndean yaseColombia siqulathe iblawuzi emhlophe, esikwe itreyini eyenziwe ngentambo kunye nemivumbo kwaye ihonjiswe ngezicelo zeephalethi. Ifakelwe i-zip ngasemva. Isiketi senziwe nge-satin enemibala eqaqambileyo kwaye ubude baso buphakathi kwethole. Ngaphantsi kwayo, kukho i-ruffle petticoat. Isiketi sihonjiswe ngemibala yeentyatyambo, nokuba zipeyintiwe okanye kusikiwe kusilika.
Njengoncedo, abasetyhini bale ndawo banxiba umnqwazi entloko obekwe kwiinwele zabo eziqokelelwe kwibhodi okanye ibhantshi okanye inxitywe njengesihlokwana kwicala lasekunene lentloko.
Ngokubhekisele kwimpahla yamadoda, ukubonakala kwayo kulula Yenziwe ngehempe enekhola evulekileyo, ipaneli yamaqhosha egxile esifubeni, kunye nebhulukhwe emnyama okanye emhlophe ecofa ibhulukhwe. Njengezincedisi, kusetyenziswe umsila wenkuku okanye isikhafu sesilika kunye nebhanti yesikhumba.
Umfanekiso | UkuhambaJet
Isinxibo esiqhelekileyo seAntioquia sineengcambu kwiipaisas muleteers zenkulungwane ye-XIX, yamadoda, nakwiindawo zokuchola ikofu zamanenekazi.
Kwimeko yamadoda, isinxibo sino umnqwazi oqhelekileyo we-Antioqueño, omhlophe oneribhoni emnyama, i-poncho okanye i-ruana (kuxhomekeke ekubeni imozulu iyabanda okanye iyatshisa) kunye ne-machete, espadrilles kunye ne-carriel. Kwimeko yabasetyhini, isuti inesiketi esimnyama esinezinto ezishicilelweyo kunye neblawuzi emhlophe ehonjiswe ngemihombiso kunye nomnqwazi.
Yenziwe ngumnqwazi obanzi-banzi, owenziwe nge-beaver okanye weva, i-liquiliqui, ibhulukhwe kunye nee-espadrilles ezenziwe ngomsonto kunye nesikhumba sodwa esikhuni. Kwezinye iindawo, isinxibo se-llanero sisenayo ibhanti ebanzi yokuthwala ivolovolo kunye nemela kunye nendawo engaphakathi yokubamba imali.
Kule ndawo yaseColombia, isinxibo sabasetyhini esiqhelekileyo sineziketi zeentyatyambo ezinobude bamadolo kunye neblawuzi emhlophe ehonjiswe ngeentsimbi zomqala kunye namabhanti. Amadoda anxiba ibhulukhwe emhlophe kunye nehempe ezihonjiswe ngeentsimbi zomqala zesimbo esifanayo. Ukuba kwimozulu eshushu, abemi balo mmandla banxiba iimpahla ezilula eziqhelekileyo, ngaphandle kweempahla ezininzi, kodwa benomtsalane.
Umfazi we-llanera uthanda ukunxiba isiketi esibanzi se-ankle, ehombisa umgangatho ngamnye ngeeribhoni kunye neentyatyambo. I-blouse imhlophe nge-neckline kunye nemikhono emifutshane. Izinwele aziqokelelwa kodwa zikhangeleka zikhululekile. Ngokuphathelele le ndoda, isinxibo sayo esiqhelekileyo sasineebhulukhwe ezimhlophe okanye ezimnyama ezisongelwe embindini wokuwela umlambo kunye nehempe emhlophe okanye ebomvu. Njengento yokuncedisa, umnqwazi obanzi obanzi, njenge-eguama yeenwele ezimnyama.
Ngenxa yemozulu eshushu nefumileyo yeCaribbean, ikhabethe eliqhelekileyo elinxitywayo lithambile kwaye lipholile. Umzekelo, kwimeko yobudoda, ilineni isetyenziswa ngokubanzi iblukhwe neehempe, ezenziwe ngemibala eqaqambileyo. I-combrero «vueltiao» isetyenziswa njengesixhobo, ithandwa kakhulu kumasebe eBolívar, Magdalena, Sucre okanye eCórdoba.
Kwimeko yabasetyhini, singathetha ngezinxibo ezinje ngeCagagena apho impembelelo yenkcubeko yase-Afrika ibonakala kwilokhwe ezimibalabala nakwiindidi zamalaphu. Umzekelo yi-palenquera, egubungela intloko ngelaphu apho bathwala khona izitya ezineziqhamo zetropiki, iilekese eziqhelekileyo kunye neebhonkco zombona.
Kwi-Pacific Coast yaseColombia sifumana ubukho obukhulu boluntu lwase-Afro-Colombian. Isinxibo esiqhelekileyo salo mmandla kubafazi siquka isiketi eside seqatha kunye neblawuzi eyenziwe ngelaphu elithambileyo ngemibala eqaqambileyo eqaqambisa ithoni yonyawo. Ngokumalunga namadoda, ikhabethe labo lenziwe zihempe ezimhlophe zesilika enemikhono emide, ibhulukhwe emhlophe yeedenim kunye nee espadrilles ezenziwe ngecabuya, ifilikisi okanye ilaphu elityebileyo lombala ofanayo.
Ezi zinxibo zaseColombia zibonisa ukwahluka kwelizwe elinamasiko anengcambu ezithi ngaxeshanye zidibane ngokwendalo, zikhokelele kwiindidi ezahlukeneyo zeempahla kunye nezincedisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Izambatho eziqhelekileyo zaseColombia
Ndwendwela umthombo weUrederra